निर्यात प्रवद्र्धनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ
सभापति, नेपाल उद्योग वाणिज्य
महासङ्घ, निर्यात प्रवद्र्धन समिति
हालै मात्र अमेरिकाले तयारी पोशाकलगायत विभिन्न ६६ उत्पादनको आयातमा भन्सार छूट सुविधा उपलब्ध गराएसँगै नेपाली निर्यात बजार उत्साहित भएको छ । आगामी १० वर्षसम्मका लागि अमेरिकामा ती वस्तुको भन्साररहित निर्यातले नेपाली औद्योगिक क्षेत्र मात्र होइन, मुलुकको सिङ्गो अर्थतन्त्र र रोजगारी सृजनामा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकामा नेपाली तयारी पोशाक निर्यातको सन्दर्भमा नेपाल वाणिज्य महासङ्घ, निर्यात प्रवद्र्धन समितिका सभापति अनुपबहादुर मल्लस“ग आर्थिक अभियान दैनिकका सुवास भट्टले गरेको कुराकानीको सार :
अमेरिकामा नेपाली तयारी पोशाक निर्यातको इतिहास कस्तो छ ?
नेपालमा कपासलगायत कच्चापदार्थ प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध हुने भएकाले घरेलु तथा कुटिर उद्योगहरूमा पहिरनका विभिन्न वस्तु उत्पादन गरिन्थ्यो । विगतमा ‘ह्याण्ड लुम’बाट तयार गरिएका कटनका टेक्सटाइल, ह्याण्डिक्राफ्टलगायत वस्तुको धेरै उत्पादन हुन्थ्यो । तिनै ह्याण्डलुमबाट तयार गरिएको ‘अर्गानिक कटन’ र त्यसबाट निर्मित वस्तु विदेशीले यहाँ घुम्न आउँदा खरीद गरेर लैजान्थे । तर, त्यो समयमा अनौपचारिक निर्यात मात्र हुन्थ्यो ।
औपचारिक रूपमा सन् १९७१ देखि अमेरिकामा नेपाली तयारी पोशाकलगायत वस्तुको निर्यात भएको देखिन्छ । तर, १९९० को दशकको पूर्वाद्र्धदेखि नेपाली वस्तुको निर्यातले अमेरिकामा उचाइ लिएको पाइन्छ । सन् १९८५ पछिचाहिँ नेपालमा गार्मेण्ट (तयारी पोशाक)का वस्तु औद्योगिक रूपमा उत्पादन हुन थालेको हो । औद्योगिक उत्पादन बढ्ने क्रममा सन् १९९४ पछि तयारी पोशाकको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएर वार्षिक करीब रू. १२ अर्बसम्म पुगेको तथ्याङ्क छ ।
सन् १९९५ मा डब्ल्यूटीओको स्थापना भएपछि सहयोग (एड) होइन, व्यापार (ट्रेड) भन्ने सवाल अगाडि आए । त्यसपछि प्रत्यक्ष सहयोग होइन, स्वतन्त्र व्यापारमा सहुलियत दिएर सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । यहीअनुसार नेपालजस्ता मुलुकसँग व्यापार हुन थालेको हो । नेपालको अमेरिकासँगको निर्यात पनि यसरी नै अघि बढिरहेको छ ।
लामो समयान्तरपछि नेपाली तयारी पोशाकलगायत उत्पादनले अमेरिकामा पुनः भन्सार छूटको सुविधा पाएका छन् । यसलाई नेपाली व्यवसायीले कुन रूपमा हेरेका छन् ?
सन् २००५ मा नेपाली गार्मेण्ट आयातमा अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको भन्साररहित सुविधा कटौती भएपछि हाम्रो निर्यात स्वाट्टै घट्यो । किनकि, हामी प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौं । अर्को, हामी भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले आफ्नै सामुद्रिक बन्दरगाहको सुविधा नहुँदा पनि निर्यातमा नकारात्मक असर परेको छ । तर, सन् २००५ पछि पनि हामीले भन्सार छूट सुविधाका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएका थियौं । गार्मेण्टसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कूटनीतिक नियोगहरूले नेपाली गार्मेण्टलाई भन्सार छूट सुविधा प्रदान गराइदिन निरन्तर प्रयास गर्दै आएका हुन् । गत वैशाखमा भूकम्प गएपछि आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने हिसाबले अमेरिकाले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
तर, अमेरिकाले प्रदान गरेको भन्सार छूटमा गार्मेण्टका वस्तु कम परेको हामीले महसूस गरेका छौं । उल्लेख्य निर्यात भइरहेको गार्मेण्ट प्राथमिकतामा परोस् भन्ने हाम्रो इच्छा थियो । गार्मेण्टमा लाग्दै आएको ५ देखि १७ प्रतिशतसम्मको भन्सार करमा छूट दिइए विगतको निर्यात पुनर्जीवित हुन्छ भन्ने आशा थियो । तर, उक्त सूचीमा गार्मेण्टका निर्यातयोग्य मुख्य उत्पादन नै छुटेको छ । यसले व्यवसायीलाई केही खिन्न बनाएको छ ।
अमेरिकाले विद्यमान व्यापार सम्झौताअन्तर्गत सुविधाका लागि अयोग्य वस्तुमा भन्सार छूट दिएको हो । यसमा गार्मेण्ट नपर्नुमा यो निर्यात योग्य नै भएर होइन र ?
त्यस्तो भन्न मिल्दैन । जस्तो, तपाईं गलैंचा र पश्मिनालाई हेर्न सक्नुहुन्छ । यी दुईओटै वस्तु निर्यात योग्य नै थिए । उनीहरूले उल्लेख गरेको भाषामा अयोग्य वस्तुलाई नै योग्य बनाइएको भन्ने पो बुझियो १ तर, यो होइन । गलैंचाको राम्रै निर्यात हुने गरेको छ, अन्यको निर्यात भने अन्यन्त सीमित छ ।
पश्मिनामा एकथरी ‘निटेड’ उत्पादन छन् भने अर्कोथरी ‘वुभन’ उत्पादन छन् । अमेरिकी बजारमा वुभनको हिस्सा २५ प्रतिशत छ, यसमा भन्सार छूट दिइएको छ भने स्वेटर, महिलाका पोशाकलगायत पर्ने निटेड उत्पादनको हिस्सा ७५ प्रतिशत छ र यसमा १३–१४ प्रतिशत भन्सार पनि लगाइएको छ । प्रशस्त ‘भ्यालू एडिशन’ पनि भएको यस्तो वस्तुमा सुविधा प्राप्त भएन भनेर हामीले निवेदन पनि गरिसकेका छौं । यसमा उनीहरू सकारात्मक छन् ।
नेपाललाई लाभ हुने हिसाबले सुविधा उपलब्ध गराइएको पनि भनिएको छ, तर मुख्य वस्तु नै किन छुटाइएको हो ? यसमा नेपालले बुझाउन नसकेको पो हो कि ?
हामीले बुझाउन नसकेको पनि एउटा पक्ष हो । एक त हामी पूर्वतयारी गर्दैनौं । राम्रोसँग अध्ययन हामीले पनि नगरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुबाट मात्रै नेपालले लाभ उठाउन सक्ने भएकाले तिनै वस्तु समावेश ६६ वस्तुलाई भन्सार छूट दिइएको भनेर अमेरिकी प्रतिनिधिले भनेका छन् । गार्मेण्टका वस्तुहरूमा तुलनात्मक लाभ नदेखेको भनेर उनीहरूले भने । तर, हामीले प्रमुख निर्यात हुने र रोजगारी तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि यसले मद्दत पुर्‍याउने भएकाले त्यसमा पुनर्विचार गरिदिन भन्यौं । तत्काल संशोधन गर्न नसकिए पनि यसबारे उनीहरू सकारात्मक छन् ।
आगामी १० वर्षमा ५ खर्बबराबरको तयारी पोशाक निर्यात गर्नुका साथै यस क्षेत्रमा करीब ८ लाखले रोजगारी पाउने महत्वकाङ्क्षा राखिएको छ । तर, विद्यमान स्थितिमा नेपालले यति ठूलो लाभ हासिल गर्न नसक्ने देखियो नि ?
यसमा अमेरिकाले क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि ल्याउँदै छ । ६६ वस्तुलाई भन्सार छूट मात्र नगरेर तिनको निर्यातमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने हिसाबले आर्थिक सहयोगसहितका कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । यिनै वस्तुमा क्षमता अभिवृद्धि गरेर अघि बढाउन सकियो भने उल्लेख्य निर्यात बढ्नुका साथै रोजगारी सृजना हुन सक्छ । यो उद्देश्य प्राप्ति गर्न गाह्रो छैन ।
यो सुविधाले अमेरिकालाई कुनै फाइदा छ वा यो नेपालप्रति देखाइएको सदाशयता हो ?
हिजोको दिनमा यिनै वस्तुको आयातबाट अमेरिकालाई ५ देखि १७ प्रतिशतसम्म राजस्व प्राप्त भइरहेको थियो । अहिले त्यसमा भन्सार छूट दिएको छ, यो उसको नेपालप्रति सदाशयता नै हो ।
निर्यातको उपयोग/प्रवद्र्धनका लागि अब सरकारले के गर्नुपर्छ ?
यसका लागि सरकारले मुख्यतः ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने हो भने सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई ऊर्जाको अभाव हुन दिनु भएन । त्यस्तै, निर्यातमूलक उद्योगलाई आम्दानीमा कर छूट उपलब्ध गराउनुपर्छ । हामी निर्यातमूलक उद्योगले वर्षेनि वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि गर्न सक्दैनौं । अहिले सरकारले निर्यातमूलक उद्योगलाई १ देखि २ प्रतिशत नगद अनुदान दिँदै आएकोमा यसलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । सरकारले निर्यातमूलक उद्योगका लागि छुट्टै श्रम ऐन ल्याउनु पनि आवश्यक छ । हाल नेपालमा वस्तुहरूको गुणस्तर मापनका लागि सुविधासम्पन्न प्रयोगशालाको अभाव देखिन्छ, यसका लागि सरकारले ‘एक्रेडिटेड ल्याब’ सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त हामीले वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ठोस खालका अध्ययन तथा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ ।
यो सुविधा उपयोग गर्न हामीलाई अहिले कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ ?
आर्थिक वर्ष सन् १९९२/९३ मा ३३ लाख वर्गमिटर हस्तनिर्मित कार्पेट विश्वबजारमा निर्यात गर्दा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा ५ लाखले रोजगारी पाएका थिए । अहिले पनि गलैंचा उद्योगमा मात्र करीब १ लाख मजदूर कार्यरत छन् । हामीले ६६ वस्तुको निर्यातलाई उचाइमा पुर्‍याउने हो भने तत्काल करीब २ लाखदेखि ३ लाख जनशक्ति आवश्यक पर्छ । हाल निर्यातमूलक उद्योगमा करीब १० लाख कामदार छन् । वस्तुहरू उत्पादनका लागि अब तत्काल वस्तुगत सङ्घमार्फत ‘ट्रेनिङ स्कूल’ सञ्चालनमा ल्याइहाल्नुपर्छ ।
नेपालले कहिलेसम्ममा अमेरिकामा वस्तुहरूको निर्यातलाई गति दिन सक्ला ?
कुनै पनि काम गर्न नेपालको प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो छ । पूर्वाधार खडा गर्नुपर्ने अवस्था पनि छँदै छ । अब राज्य र निजीक्षेत्र मिलेर केके गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा काम तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । निर्यातको प्रभाव कुर्न अझै १/२ वर्ष लाग्छ ।
नयाँं स्थितिमा हामीसँग उपलब्ध प्रविधिले काम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
गुणस्तरका लागि नयाँ प्रविधि पनि जरुरी छ । अहिले सीमित उद्योगले मात्र नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेका छन् । निर्यात बढाउने कुरामा हामी सकारात्मक छौं । यसमा राज्यले पनि निर्यातमूलक उद्योगको समस्या बुझ्ने/अध्ययन गर्ने निकाय बनाउनुपर्छ । सरकारले निर्यातका लागि अलग्गै मन्त्रालय बनाउनुपर्छ । निर्यातका लागि अहिले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र छ । त्यहाँ वार्षिक बजेट ५/६ करोडको छ । यसले राम्रो परिणाम दिन सकेको छैन ।
अहिले यूरोपेली मुलुकसहित रूस, क्यानडा, जर्मनीलगायत मुलुकले पनि विभिन्न वस्तुको निर्यातमा भन्सार छूट दिएका छन्, त्यहा“ हामीले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न किन नसकेको ?
हो, विभिन्न मुलुकले नेपाली उत्पादनको आयातमा भन्सार छूट दिइरहेका छन् । तर, ती मुलुहरूमा निर्यात घट्दै गएको छ । त्यसैले, निर्यात क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनिएको हो । यसमा राज्य बढी गम्भीर हुनुपर्छ । अहिले अमेरिकाले भन्सार छूट दिएको छ । उसले क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि दिन्छ भनेर हामी केही नगरी बस्नु हुँदैन । त्यसैले, अब राज्यले निजीक्षेत्रका सङ्घसंस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
नेपाली उत्पादनको निर्यातमा भारतबाट पनि अवरोध छ भनिन्छ नि ?
अहिले भारतले नेपालको दुरुस्तै गलैंचा उत्पादन गरेर इण्डोनेपाल गलैंचा भनेर अमेरिका र यूरोपेली बजारमा बेचिरहेको छ । भारत अहिले अल्पविकसित राष्ट्र होइन, विकसित राष्ट्र हो । अल्पविकसित राष्ट्रले प्राप्त गर्ने सुविधा प्रयोग गरेर निर्यात गर्न पाइन्न भन्ने डब्ल्यूटीओको नीतिमा छ । उसले हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गरेको छ । यसका लागि हामीले आवाज उठाउनुपर्छ ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि व्यवसायीहरू कत्तिको तयार छन् ?
हामी एकदमै उत्साहित छौं । त्यसका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसलाई भाषणबाजीमा मात्र सीमित नराखेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । विभिन्न मुलुकमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूले आर्थिक कूटनीतिमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु । वस्तुहरूको प्रवद्र्धनमा पनि उनीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ।